Oké ọkọchị na-emetụta ụmụaka 120.000 na Mauritania | Network Meteorology
Childrenmụaka kacha emetụta okpomoku ụwa. Nke a bụ eziokwu na, ọ dị nwute, enweghị mkpa ọ kwesịrị. Ma na mba ndị mepere emepe »nwere gas na-emerụ ahụ nke na-abanye n'ikuku kwa ụbọchị, ma na mba ndị na - emepe emepe» oke ọkọchị na ide mmiri, ọ bụ ha na-enweta akụkụ kachasị njọ.
Ọ bụ ikpe nke 120.000mụaka XNUMX si Mauritania, otu mba na-enwe oke ọkọchị kemgbe ọtụtụ afọ ugbu a, dịka otu nzukọ na-abụghị nke gọọmentị na-enyere ha aka kemgbe 2006 si kwuo, bụ Save the Children.
N'afọ a, 2017, ndị NGO, tinyere Directorate General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO), Ha arụ ọrụ na obodo 89 na Brakna, nke bụ otu n'ime mpaghara anọ kachasị daa ogbenye na mba ahụ, na-eje ozi ihe karịrị 10.000 ndị Mauritania, nke bụ ihe dị ka ezinụlọ 1450. Organizationslọ ọrụ abụọ ahụ kesara "nnyefe ego, ngwa ngwa ọcha na ntụ ọka siri ike maka ụmụaka n'okpuru afọ abụọ, ụmụ nwanyị dị ime ma ọ bụ na-enye nwa ara n'etiti ọnwa Mee na Ọgọstụ, oge ọkọchị na mba ahụ," ka ọ kọwara. Zọpụta ụmụaka.
Ọzọkwa, mere mmemme ngosi nri n'ime obodo iji kụzie etu esi esi ntụ ọka. Ọrụ nke nyeere ndị nne aka ịghọta mkpa ịdị ọcha nke arịa kichin dị, ọ kachasị mgbe ha nwere ụmụaka na-erubeghị afọ ise. Ha natakwara ọtụtụ ndụmọdụ iji gbochie erighị ihe na-edozi ahụ na ụmụ ha.
Ọnọdụ nri na Mauritania dị njọ, ọ nwere ike ịdị karịa ma ọ bụrụ na emeghị ihe iji belata mmetụta nke ụnwụ ahụ na ezinụlọ ndị kachasị emetụta. N'ime ihe ọ bụla, Ihe ruru ụmụaka 165.000, ụmụ nwanyị dị ime na ndị na-enye nwa ara nwere ike ịrịa ezigbo nsogbu nke erighị ezigbo nri na 2018.
Chekwaa ụmụaka ga-aga n'ihu na ọrụ ebere ya ruo mgbe ọnọdụ a ga-edozi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oké ọkọchị » Oké ọkọchị na-emetụta ụmụaka 120.000 na Mauritania
Nchịkọta Weather maka 2017